Duulimaadkii ugu horreeyay ee rakaab caalami ah ayaa ka duulaya garoonka diyaaradaha ee Kabul
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Afgaanistaan » Duulimaadkii ugu horreeyay ee rakaab caalami ah ayaa ka duulaya garoonka diyaaradaha ee Kabul
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dadka • Wararka Qadar • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Duulimaadkii ugu horreeyay ee rakaab caalami ah ayaa ka amba baxay madaarka Kabul
Kooxaha farsamo ee Qatar iyo Turkiga ayaa gacan ka gaystay dib u soo celinta hawlihii garoonka diyaaradaha, kuwaas oo waxyeelo soo gaartay intii ay socdeen daadgureynta tobanaan kun oo qof si ay ula kulmaan waqtiga kama dambaysta ah ee ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee 31 -ka Ogosto.
Diyaaradda Qatar Airways ayaa rakaabkii caalamiga ahaa ka duushay gegida diyaaradaha ee Kabul.
Mas’uul ka tirsan dowladda Qatar ayaa u arka in garoonka diyaaradaha ee Kabul uu shaqeynayo.
Taalibaan ayaa u oggolaanaysa ajaanibta inay ka baxaan Afgaanistaan ​​iyagoo raacaya duulimaadyo ganacsi.
Iyadoo sarkaal sare oo ka tirsan Qadar uu ku dhawaaqay in gegida diyaaradaha ee Kabul “si buuxda u shaqayneyso,” duulimaadkii ugu horreeyay ee rakaab caalami ah ayaa maanta ka dhoofay garoonka caalamiga ah ee Hamid Karzai.
Tani waxay ahayd duulimaadkii ugu horreeyay ee ganacsi oo ka amba -baxa HKIA tan iyo markii waddamada reer galbeedku soo afjareen duulimaadyadoodii daadgureynta Afghanistan toddobaad iyo bar ka hor.
Sida laga soo xigtay Mutlaq al-Qahtani, oo ah ergeyga gaarka ah ee Qadar ee Afgaanistaan, oo maanta ka hadlayay laamiga, garoonka diyaaradaha “90% ayaa diyaar u ah hawlgal,” laakiin dib-u-furitaankiisa si tartiib tartiib ah ayaa loo qorsheeyey.
“Tani waa maalin taariikhi ah taariikhda Afghanistan maadaama gegida diyaaradaha ee Kabul ay si buuxda u shaqeyneyso. Waxaan la kulannay caqabado aad u weyn…
The Qatar Airways diyaarad ayaa timid Madaarka Kabul goor hore oo khamiistii siday gargaar. Waxay u ambabaxday Doha, Qatar oo ay la socdeen rakaab, oo ay ku jiraan koox badan oo ajaanib ah.
Al-Qahtani wuxuu yidhi, u yeedh waxaad rabto, kirayste ama duulimaad ganacsi, qof kastaa wuxuu haystaa tigidh iyo kaararka raacitaanka, ”ayuu yidhi al-Qahtani, oo tilmaamaysa in tani runtii ahayd duulimaad joogto ah. Wuxuu sheegay in duulimaad kale lagu wado inay baxdo Jimcaha. “Waxaan rajaynayaa in noloshu ay caadi ka noqoto Afghanistan,” ayuu raaciyay.
Saraakiisha Qatar ayaa goor sii horreysay sheegay in xukuumadda Taalibaan ee Afghanistan ay u oggolaan doonto inta u dhexeysa 100 illaa 150 reer galbeed ah oo ay ku jiraan Mareykan inay ka duulaan Kabul saacadaha soo socda.
Af -hayeenka Daalibaan Zabihullah Mujahid ayaa uga mahadceliyey Qatar kaalmada ay ka geysatay in garoonka uu noqdo mid shaqeynaya iyo gargaarka bani’aadamnimo ee Afghanistan.
“Mustaqbalka dhow, garoonku wuxuu diyaar u noqon doonaa dhammaan noocyada duulimaadyada oo ay ku jiraan duulimaadyada ganacsiga,” ayuu yiri, isagoo garab taagan madaxda Qatar ee laamiga garoonka.